Events | ShweBiz.com
Duration: 10 Jul 2022 - 10 Jul 2022
Duration: 19 Jun 2022 - 19 Jun 2022
Daw Aung San Suu Kyi 77th Birthday Australia
အမေစုမွေးနေ့ 19 June 2022 Sunday 9:00am to 1:00pm @ Mingalathukha Vihara 76 Templeton Cres Girrawheen
Tisarana Vihara Monastery Food Fete
တိသရဏကျောင်းစျေးရောင်းပွဲ 19 June 2022 Sunday 10 am to 1pm @173 Albert Street, Middle Swan
Damindarama Monastery KOONDOOLA Food Fete
ဓမိန္ဒာရာမကျောင်းစျေးရောင်းပွဲ 29 May 2022 (Sunday) 9am to 2pm @ 50 Butterworth Ave, Koondoola WA 6064
Autumn Food Fair Organised by KnCWA (Karenni Community of WA Inc)
25 Aug 2022 (Saturday) 10:30 am to 1:30 pm Maddington Community centre 19 Alcock St, Maddington WA 6109
Tisarana Vihara Buddha Day
ကဆုန်ပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ ပူဇော်ပွဲသို့ ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Duration: 15 May 2022 - 15 May 2022
Mingalathukha Vihara Kason Bodhi Tree Watering Festival
မင်္ဂလသုခ ဝိဟာရ ကဆုန်ညောင်ရေသွန်း နှင့် အန္တရယ်ကင်း ပရိတ်တရားနာ
Dhamma Cedi monastery Bodhi Tree Watering Festival
ဓမ္မစေတီကျောင်း ဗောဓိညောင်ရေသွန်းလောင်းပွဲ နှင့် ရုပ်ပွားတော်များ အနေကဇာတင်ခြင်း အခမ်းအနား
Duration: 14 May 2022 - 14 May 2022
Fundraising Event for NUG Ministry of Health
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ သြစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေ​၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့မှ ဧပြီလ (၅) ရက်နေ့အတွင်း Perth, Western Australia State ခရီးစဉ်အတွင်း CRPH/NUG Perth မြို့ရှိ မြန်မာတိုင်းရင်းသား မိသားစုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစည်းအဝေး တရပ်ကို ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး NUG Office (Australia) က ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ရှိသော လုပ်ငန်းများကို တင်ပြကာ အဆိုပါ လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ကဏ္ဍများကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကဏ္ဍ များ​၏ အစိတ်အပိုင်းတခုအဖြစ် NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူသားချင်းစာနာ အထောက်အကူပြု Mobile Hospital အတွက် လိုအပ်သော ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများအလှူခံခြင်းနှင့် ရံပုံငွေရှာ ဈေးရောင်းပွဲအား အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း လူပုဂ္ဂိုလ် မဆို ပါဝင်ဆင်နွဲနိုင်ပါကြောင်းလေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် နေ့ရက် ၂၄.၄,၂၀၂၂ (တနင်္ဂနွေနေ့) အချိန် နံနက် ၉ နာရီ မှ နေ့လည် ၁နာရီထိ နေရာ မင်္ဂလသုခ ဝိဟာရကျောင်း 76,Templeton Cresent, Girrawheen,WA အရေးတော်ပုံ မုချအောင်ရမည်
Burmese New Year Dhamma Chanting
နှစ်ဦးအလှူနှင့် သက်တော်ရှည်တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ကြီး ဦးကုမာရ ထံမှ နှစ်ဦး အန္တရယ်ကင်းပရိတ်တရားနာကြားခြင်း
Duration: 17 Apr 2022 - 17 Apr 2022
NUG Support Food Fete
U Pinna Sekka Funeral
ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူခဲ့သည့် မဇ္ဈိမရိပ်မြိုင်ကျောင်း ဆရာတော် ဦးပညာစက္က ၏ အန္တိမဈာပန အခမ်းအနား
Duration: 15 Apr 2022 - 23 Apr 2022
CRPH/ NUG Support Food Fete by WAMC
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အရေးပေါ် လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကို CRPH/ NUG မှ တဆင့် လှူဒါန်းရန်အတွက် စျေးရောင်းပွဲ 20 Feb 2022 (Sunday) 4:00pm to 7:00pm @Willeton Sports & Community Centre Pre-Order Form https://neartail.com/au/wamc-2021/WAMC
NUG & CDM Support Food Fete
NUG & CDM ထောက်ပံ့ရေးစျေးရောင်းပွဲ 13th Feb 2022 Sunday 10:30am to 1:00pm @ DhmmaCedi 53 Hemingway, Camillo WA 6111
Duration: 13 Feb 2022 - 13 Feb 2022
CDM support & Htamanè Festival
ထမနဲပွဲနှင့် CDM ထောက်ပံ့ရေးစျေးရောင်းပွဲ 13 Feb 2022 Sunday 10 am to 1:30pm @Tisarana Vihara 173 Albert Road, Middle Swan
Myanmar Coup Protest Rally
Duration: 30 Jan 2022 - 30 Jan 2022
Summer Program for Kids, Meet the Professionals
လာမည့် တနင်္လာနေ့မှာ ကလေးတွေကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းမှန်ရောက်အောင် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာရှင်များနဲ့ မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံ အလုပ်တစ်ခုခြင်းဆီရဲ့ အကြောင်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေ အနာဂတ်မှာ သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ အိမ်မက်တွေကို အကောင်ထည်ဖော်နိုင်အောင် လမ်းပြပေးနိုင်မယ့် အောင်မြင်တဲ့သူတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ အဲဒီပွဲကို လာရောက်ကြဖို့ နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ 24 Jan 2022 9:00am to 12:00pm @Riverton Library 67 Riley Rd, Riverton WA 6148
Duration: 24 Jan 2022 - 24 Jan 2022
Save Myanmar Dinner Cruise
23 Jan 2022 6:15pm – 9:30pm Departure Point : Barrack Jetty, Organised by Kachin Association & WAMDN Download File as PDF Source: WAMDM facebook page
Duration: 23 Jan 2022 - 23 Jan 2022
NUG & CDM Support Food Fete @DhammaCedi
16 Jan 2021 Sunday 10:30AM to 1:00PM @ DhammaCedi 53 Hemingway Drive Camillo
Spring Revolution Support Fundraising Event
နွေဦးတော်လှန်ရေးထောက်ပံ့ရေးအတွက်စျေးရောင်းပွဲ 16 Jan 22 Sunday 9am-1pm @Mingalathukha Vihara, 76 Templeton Crescent Girrawheen
Summer Sport Carnival by PTH (Perth)
PTH (Perth) မှ ကြီးမှုးကျင်းပသည့် နွေရာသီ အားကစားပွဲတော် 8 Jan 22, 9am to 5pm @ Paloma Park, Marangaroo WA Source# https://www.facebook.com/Pyit-Taing-Htaung-Social-Club-104154501913767/
Duration: 8 Jan 2022 - 8 Jan 2022
***စာရင်းပေးသွင်းသူ ၃၅ယောက်ရှိသွားပြီမို့ စာရင်းလက်ခံမှု ပိတ်လိုက်ပါပြီ*** ***Registration Closed for Summer Program for kids as it reaches to 35*** ကလေးတွေကို အချိန်အလကားမကုန်ပဲ အကျိုးရှိအောင် အသုံးပြုဖို့ ဗဟုသုတတိုးပွါးစေဖို့ နွေရာသီသင်တန်းကို စာရင်းပေးလို့ရပါပြီ Summer Program for Kids can be registered at: https://forms.gle/NALG1KHicEXQTE8a8
Duration:3Jan 2022 - 24 Jan 2022
December Vipassana Pratityasamutpada3Days Retreat
ဝိပဿနာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ၃ရက်စခန်း 25 Dec to 27 Dec 2021 @ Mingalathukha Vihara 76 Templeton Cres, Girrawheen ဝိပဿနာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဒီဇင်ဘာနှစ်ကူး ဥပုသ် (၃) ရက် အထူးသင်တန်းတရားစခန်းဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာနှစ်ကူးမှာ ဥပုသ်စောင့်လိုသော ယောဂီများ ကျောင်းတွင်နေထိုင်ပါတယ်။ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ်သင်တန်းတရားအချိန်များလည်း ထည့်သွင်းထားသည့်အတွက် သင်တန်းတရား၊ တရားထိုင် ၊ ဥပုသ်စောင့်ယောဂီများအတွက် တရားဓမ္မနှင့်မွေ့လျှော်ကုသိုလ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းနေယောဂီများ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ အတွင်းကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီး မင်္ဂလသုခဝိဟာရမိသားစု မင်္ဂလသုခဝိဟာရ 76 Templeton Cres, Girrawheen, WA.
Duration: 25 Dec 2021 - 27 Dec 2021
Spring Revolution Support Fundraising
နွေဦးတော်လှန်ရေးအထောက်အကူပြုစျေးရောင်းပွဲ 19 Dec 2021 9:00AM – 1:00PM @ Mingalathukha Vihara 76 Templeton Crescent Girrawheen WA 6064
Duration: 19 Dec 2021 - 19 Dec 2021
ဓမ္မစေတီကျောင်း NUG & CDM ထောက်ပံ့ရေး စျေးရောင်းပွဲ 12 Dec 2021 10:30am to 1:00pm @ Dhammacedi Monastery 53 Hemmingway Drive Camillo WA 6111
Duration: 12 Dec 2021 - 12 Dec 2021
BAWA Monthly Food Fete
BAWA Food Fete, 11 Dec 2021 SATURDAY AT 10 AM – 1 PM @The Burmese Association of WA, 275 Stirling St, Perth WA 6000, Australia Source: BAWA Facebook Event Page https://www.facebook.com/events/1063881207760751
Duration: 11 Dec 2021 - 11 Dec 2021
DHAMMINDARAMA Food Fete
DHAMMINDARAMA Food Fete 28/11/2021 SUNDAY9am2pm @50 BUTTERWORTH AV, KOONDOOLA WA
Duration: 28 Nov 2021 - 28 Nov 2021
Chin Community Food Fair
ချင်းပြည်နယ်ရှိပြည်သူများအတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးစျေးရောင်းပွဲ 27 Nov 2021 Saturday 10am to 1pm @ Balga Social & Soccer Club, Princess Road, BALGA.
Duration: 27 Nov 2021 - 27 Nov 2021
WA Myanmar Community Food Fair
WA Myanmar Community Food Fair 27 Nov 2021 Saturday 5pm to 7pm @ Lesser Hall, Maddington Community Center 19 Alcock St, Maddington WA 6109
Fundraising for Burma supporting our Spring Revolution
21 Nov 2021 (Sunday)9AM to 1PM @ 76 Templeton Cres Girrawheen မင်္ဂလသုခဝိဟာရ ပြည်သူ မှ ပြည်သူသို့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအတွက် ထောက်ပံ့ရန် ဈေးရောင်းပွဲ
Duration: 21 Nov 2021 - 21 Nov 2021
Tisarana CDM Fundraising
တိသရဏကျောင်း CDM ရံပုံငွေစျေးရောင်းပွဲ 21 Nov 2021 11am to 2pm @ Tisarana Monastery 173 Albert Road, Middle Swan
Dhammacedi Kathina Robe Offering Ceremony
14th Nov 2021 Sunday 9.30am to 1.00pm @ Dhammacedi Monastery 53 Hemmingway drive, Camillo WA 6111 ဓမ္မစေတီကျောင်းကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ Download File in PDF Source: Dhammacedi Monastery
Duration: 14 Nov 2021 - 14 Nov 2021
BAWA Food Fete, 13 Nov 2021 SATURDAY AT 10 AM – 1 PM @The Burmese Association of WA, 275 Stirling St, Perth WA 6000, Australia Source: BAWA Facebook Event Page https://fb.me/e/1w4gpWMH3
Duration: 13 Nov 2021 - 13 Nov 2021
Dhammathiri Kathina Robe Offering Ceremony
ဓမ္မသီရိရိပ်သာ စုပေါင်းဘုံကထိန် 13 Nov 2021 Saturday 10 am to 2pm @ Dhammathiri Yeik Thar 35 Southgate Road, Langford WA Source: ဓမ္မသီရိရိပ်သာ
Starry Music Dinner Night Fundraising for Myanmar
6 Nov 2021 6:00pm @Subiaco Football Club 246 Vincent Street Leederville WA 6007
Duration:6Nov 2021 -6Nov 2021
PawDawMu Kathina Ceremony 2021
6 Nov 20219to 12:30 @ PawDawMu Monastery 33 Hartfield St, Queenspark
Dhamma Thiri End of Rain Retreat
6. 11. 2021 (Saturday) 5.30 pm to 7.30 pm @ Dhamma Thiri Yeik Thar 35 Southgate Road Langford
Kathina Robe Offering Ceremony @Mingalathukha Vihara
31.10.2021 Invitation to Kathina ceremony You are invited to join us Kathina Robe Offering Ceremony on Sunday 31.10.2021 at Mingala Thukha Vihara. 9:00 am individual Robes offerings 10:00 am Dhamma talks and blessings 10:45 am Offering rice at Alms round 11:00 am Lunch Dana to monks and delicious Burmese food to all. All invited. 🙏🙏🙏 မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် လတန်ဆောင်တိုင်မှာ ကျင်းပမည့် မင်္ဂလသုခဝိဟာရရဲ့ ကထိန်အလှူတော်ပွဲကိုဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ——– တစ်နှစ် တစ်ခါ….. တန်ဆောင်တိုင်လ ရဲ့ မဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်ကို 31. 10. 2021နေ့မှာ မင်္ဂလသုခဝိဟာရ မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ စတုဒိသာ ဟင်းမျိုးစုံဖြင့်လည်း တည်ခင်းဧည့်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရေ….. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ရိုးရာ ကုသိုလ်ထူး…နေ့ထူးနေ့မြတ်…။ မင်္ဂလသုခဝိဟာရ မဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်သို့ ကြွရောက်ကြပါရန်ခင်မင်ရင်းနှီးစွာအထူးဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။ 🙏🙏🙏 မင်္ဂလသုခဝိဟာရ။
Duration: 31 Oct 2021 - 31 Oct 2021
Protest Rally in Perth against Myanmar military coup
Perth မြို့ ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ October 30, Saturday 2pm-4pm စုရပ် Langley Park
Duration: 30 Oct 2021 - 30 Oct 2021
Koondoola Monastery Kathina Ceremony
24 Oct 2021 Sunday 8:30 am to 2:00 pm @ ဓမ္မိန္နာရာမကျောင်း 50 Butterworth AV, KOONDOOLA
Duration: 24 Oct 2021 - 24 Oct 2021
Western Australia Myanmar Community 6th Fundraising Food Fete
24-10-21 (Sunday) 5:00pm-7:00pm Willetton sports and community Centre, 58 Burrendah Blvd , Willetton WA 6155 Western Australia Myanmar Community ဆဌမအကြိမ်မြောက်ရန်ပုံငွေရှာဈေးရောင်းပွဲ။ ရရှိလာမယ့်အလှူငွေများကိုတော့ MOD နဲ့ IDPs အတွက်အဓိကထားပြီးလှူဒါန်းပေးပို့သွားမည်။ Pre-Order Link : https://tinyurl.com/653y43mt
Pavarana Ceremony @ Mingala Thukha Vihara
20 Oct 2021 from 5pm @ Mingalathukha Vihara 76 Templeton Cres Girrawheen Pawarana 20.10.2021 Invitation to particapte in the most auspicious Pavarana Ceremony at Mingala Thukha Vihara 76 Templeton cresent, Girrawheen on Full moon day of Thadingyut 20.10.2021 from 5pm onwards. 5:00 pm. All Sanghas residing in Perth attending Sima performing Pavarana 5:45pm: Offer Requisites to Buddha plus 15 Sanghas, total 16 Sanghas in procession exiting the sima. 6:00 pm Dhamma talk 6:30 pm enjoyavariety of food for all 6:00 -9:00 individual offering of candles and prayers at the Bodhi tree. 20.10.2021 နေ့ သီတင်းကျွတ်လ ပြည့်နေ့ကျင်းပမဲ့ Perth မြို့သံဃာအားလုံးပါဝင်မည့်သံဃာ့ပဝါရဏာ နှင့် သံဃာသိမ်ဆင်းလောင်းပွဲ၊နေ့ထူး နေ့မြတ်မှာကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
Duration: 21 Oct 2021 - 21 Oct 2021
Abidhamma Day Tisarana Vihara
တိသရဏကျောင်း အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ October 17, 2021 @ Tisrarna Vihara 173 Albert Road, Middle Swan
Duration: 17 Oct 2021 - 17 Oct 2021
Meeting for Perth Anti Coup Rally for Myanmar
Langley Park မှာ နေ ရာ ရ ပါ ပြီ။ လို အပ် သော Process များ ဆက် လုပ် နေ ပါ သည် ။ Source# Ko SLO Facebook October 9, 2021 2:00pm @ Mingalathukha Vihara, 76 Templeton Crescent Girrawheen
Duration:9Oct 2021 -9Oct 2021
People to People Fundraising Perth
26 September 2021 9am to 1pm @ 76 Templeton Cres Girrawheen ပြည်သူ မှ ပြည်သူသို့ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းနိုင်ရန် အလှူငွေရှာ ရံပုံငွေဈေးရောင်းပွဲ ….
Duration: 26 Sep 2021 - 26 Sep 2021
Western Australia Myanmar Community Fundraising for Myanmar
25-09-21 (Saturday) 5pm to7pm @ Kelmscott Hall 60 River Road , Kelmscott WA 6111 Western Australia Myanmar Community ရဲ့ ၅ကြိမ်မြောက် ရန်ပုံငွေရှာပွဲ။ ရရှိလာမယ့်အလှူငွေများကို အရေးပေါ်လိုအပ်သောနေရာများသို့ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိအောင် CRPH/NUG မှတဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးပေးပို့လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်။
Fundraising for Karen State
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်ဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် ဈေးရောင်းပွဲတော်
Duration:5Sep 2021 -5Sep 2021
Fundraising Food Fete for Mindat
4 Sept 2021 Saturday 2pm-6pm @ 87 Crocker Drive, Malaga WA 6063 မင်းတပ် ရှိ အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေသူများအတွက် ရံပုံငွေရှာစျေးရောင်းပွဲ
Duration:4Sep 2021 -4Sep 2021
Western Australian Myanmar Community Fundraising Food Fete
22 Aug 2021 Sunday Willetton Sports and Community Centre 58 Burrendah Blvd, Willetton WA 6155 Pre Order: https://sites.google.com/view/wamcfood/
Duration: 22 Aug 2021 - 22 Aug 2021
Spring Revolution Support Food Fete (Mingalathukha)
22 Aug 20219am – 1pm @ 76 Templeton Crescent Girrawheen
Paw Daw Mu Waso Robe Ceremony
22 Aug 2021, 11 AM @33 Hartfield Street, Queens Park
Food Fair by Karenni Families in WA
August 21, 2021 11 am – 2pm 151 Verna Street, Gosnells WA 6110
Duration: 21 Aug 2021 - 21 Aug 2021
Myanmar United Fundraising
Sunday 15/08/2021 10am to 1pm 33 Hart field Street , Queens Park မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အရေးပေါ် လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကို လှူဒါန်းရန်အတွက် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် စျေးရောင်းပွဲ
Duration: 15 Aug 2021 - 15 Aug 2021
CDM Fundraising Food Fair
8 Aug 2021, Tisarana Vihara 173 Albert Road, Middle Swan
Duration: 8 Aug 2021 - 8 Aug 2021
Dhamma Cedi Waso Robe Ceremony
8th August 2021 Sunday from 9:30 am, 53 Hemingway Drive, Camillo WA 6111
8888 Event Perth
8/8/21 10 am to 12pm Parliament House (West Perth) NUG အစိုးရနှင့်အတူတကွ ပြည်ပရောက် မြန်မာများ ဆင်နွဲဲကြမည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၈လေးလုံး အမှတ်တရပွဲကြီးကို ၈.၈.၂၁ မှာ WA ကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ကြမည်။ NUG မှာ သမ္မတကြီး အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဒုသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလနှင့်တကွ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးမင်းကိုနိုင်တို့၏ အဖွင့်အမှာစကားများနှင့်အတူ WA မှ Australian အမတ်များလည်းတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြမည်။ မြန်မာ လူမျိုးတိုင်း မဖြစ်မနေတက်ရောက်သင့်သည့်ပွဲမို့ အားလုံးညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ UNITED WE STAND CRPH/NUG SUPPORT GROUP WA We will be part of the Global movement of 8888 uprising memorial event which is requested by NUG on 8.8.21. Acting President Duwa Lashi La and Forieng Minister Zin Mar Aung from NUG and Senior Students Leader (8888) Min Ko Naing and many Politicians of Australia will be giving speach at the event. Please participate in it to support NUG and show the Solidarity with our friends and families in Myanmar. Source# Western Australia Myanmar Democratic Network
Fundraising Charity Buffet Dinner
August 7, 2021 7pm Alexander Heights Community Centre 18 Linto Way, Alexander Heights Fundraising Charity Buffet Dinner, 100% of fund will donate to Myanmar.
Duration:7Aug 2021 -7Aug 2021
Dhamma Thiri Waso Robe Ceremony
7 Aug 2021 9:30 AM, Dhamma Thiri 35 Southgate Road Langford WA
Mingalathukha Vihara Waso Robe Ceremony
25 July 2021 9:00 AM 76 Templeton Crescent, Girrawheen 6065
Duration: 25 Jul 2021 - 25 Jul 2021
Meeting for 8888 Event
24/7/21 4PM Balga Soccer Social Club, Princess Road BALGA
Duration: 24 Jul 2021 - 24 Jul 2021
Spring Revolution Support Fundraising Mingalathukha Vihara
July 18, 2021 @ Mingalathukha Vihara 76 Templeton Crescent Girrawheen နွေဦးတော်လှန်ရေးအထောက်အကူပြုစျေးရောင်းပွဲ
Duration: 18 Jul 2021 - 18 Jul 2021
Fundraising Event for NUG/CDM (Football & Food)
June 20, 2021 @ Grand Promenade Reserve (Fortnightly Sundays 1pm – 5pm) အော်ဒါများကိုလည်း ကြိုတင် မှာယူနိုင်ပါပြီး။ ဘောလုံးပွဲလေးကြည့်ရင်း မြန်မာ့အစားအစာများကို သုံးဆောင်နိုင်ကြဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ မှတ်ချက် အစားအသောက် အိမ်ပို့ဆောင်ခြင်း မရှိပါ။ Source: Zawro.Kz
DhammaCedi Fundraising NUG,CRPH &CDM Support
June 20, 2021 (10:30 am to 12:30 pm) DhammaCedi Monastery 53 Hemingway Drive, Camillo WA 6111
Mingalathukha Monthly Food Fete
20 June 2021 9am to 1pm @ Mingalathukha Vihara 76 Templeton Cres Girrawheen
Fundraising Food Fair (The Burmese Catholic Community of WA Inc)
19 June 2021 (Saturday) 10:00 AM – 2:00 PM Holy Family Catholic Church 45 Thelma St, Como WA 6152
Duration: 19 Jun 2021 - 19 Jun 2021
Daw Aung San Suu Kyi Birthday Ceremony Perth
Mingalathuka Vihara 19 June 2021 3pm-4pm
Kachin Association WA Fundraising for Myanmar
June 13, 2021 (11am to 2pm) 25 Weddall Road, Lockridge WA 6054 Kachin Association WA Fundraising for Myanmar
Duration: 13 Jun 2021 - 13 Jun 2021
Perth Myanmar Community Fundraising
June 13, 2021 (5pm-8pm) Willetton Sports and Community Centre 58 Burrendah Blvd, Willetton WA 6155
Tisarana Fundraising for NUG
June 6, 2021 (10 am to 1pm) 173 Albert Road, Middle Swan တိသရဏကျောင်း NUG Fundraising
Duration:6Jun 2021 -6Jun 2021
Mizzima Yeik Myaing CRPH Fundraising
မဇ္ဇိမရိပ်မြိုင်ကျောင်း CRPH ရံပုံငွေ စျေးရောင်းပွဲ
Mingalathukha Vihara CRPH Fundraising
CRPH ၏ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် ရံပုံငွေရှာစျေးရောင်းပွဲ
Duration: 30 May 2021 - 30 May 2021
Mingalathukha Vihara Food Fair
Duration: 16 May 2021 - 16 May 2021
CDM ဝင်နေသူများနဲ့ Gen-Z များအတွက် ရံပုံငွေရှာပွဲ
Kayah/ Karenni Charity Food Fair for Myanmar
Duration: 25 Apr 2021 - 25 Apr 2021
Fundraiser for the Karen people displaced by military junta
ကရင်ပြည်နယ်တွင် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်များက လေယာဉ်ဖြင့် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှု့ကြောင့် အပြစ်မဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ပြည်သူများ သေကြေ ၊ ထိခိုက် ၊ စစ်ဘေးရှောင်လျှက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် မင်္ဂလသုခဝိဟာရ မှာ (၁၈) ရက် နေ့တွင် ( ပုံမှန်ကျောင်းဈေးရောင်းပွဲကို ဒီလရပ်နားထားပြီး) ကရင်ပြည်နယ် အရေးပေါ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကို ကူညီပေးရန် ဈေးရောင်းပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါသည်။ ရရှိလာသော အလှူငွေများကို AKO ကရင်လူမှု့အဖွဲ့အစည်း – ဩစတေးလျ (Perth) ကို တခါတည်းပေးအပ်လှူဒါန်းသွားမည်။ Source# Mingalathukha Vihara
Duration: 18 Apr 2021 - 18 Apr 2021
Homage to the Elders & Multi religion prayers
Monhingar and Halawar Home delivery Fundraising for Myanmar
#Crd Phyu Nyein Soe
Duration: 11 Apr 2021 - 11 Apr 2021
Dhammacedi Burmese Foodfete
Duration: 10 Apr 2021 - 10 Apr 2021
Food Fete for Myanmar
မြန်မာနှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှ ကျင်းပပေးသည့် စာနာမှုများဆုံဆည်းရာ Food Fete For Myanmar
Duration:3Apr 2021 -3Apr 2021
Dhamma Cedi CRPH & CDM Fund
၂၀၂၁ မတ်လ ၂၇ရက်နေ့ (တော်လှန်ရေးနေ့) ညနေ ရံပုံငွေရှာဖွေရေး အစားအသောက် ရောင်းချခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ မီးထွန်းမေတ္တာပို့ ဆုတောင်းပွဲနှင့် ဤဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးတွင် ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးသွားသူများအား ကူညီထောက်ပံရန် သဒ္ဓါရှိသ၍ အလှူငွေကောက်ခံခြင်းတို့ကို ထည့်သွင်းပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ ကြွရောက်အားပေး ပါဝင်နိုင်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Mingalathukha Monthly Foodfair & CDM Fundraising
You are cordially invited to join us in our Monthly Foodfair this Sunday 21.3.21 and the following Sunday 28.3.21 for CDM Support Fundraising. TShirts for supporters of Daw Aung San Suu Kyi are now available.
Duration: 21 Mar 2021 - 21 Mar 2021
Candle light vigil in solidarity with the people of Burma and blessings for the fallen
A candle light vigil will be held on 13 March ( Saturday) 2021 at Mingala Thikha Vihara at7p.m to show our solidarity to the people of Myanmar who are under violent suppression by the Junta/Military. Please come to show your support and blessings for the fallen Martyrs.
Duration: 13 Mar 2021 - 13 Mar 2021
DhammaCedi Food Fete
ဓမ္မစေတီကျောင်း၏ လာမည့် စနေနေ့ ၁၃/၀၃/၂၀၂၁ ညနေတွင်ကျင်းပမည့် ကုသိုလ်ဖြစ် စျေးရောင်းပွဲတွင် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော မတရား လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်မှု့များ၌ အသက်ပေးသွားကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုရည်စူး၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ မီးထွန်းမေတ္တာပို့ ဆုတောင်းပွဲနှင့် ဤဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးတွင် ထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးသွားသူများအား ကူညီထောက်ပံရန် သဒ္ဓါရှိသ၍ အလှူငွေကောက်ခံခြင်းတို့ကို ထည့်သွင်းပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ ကြွရောက်အားပေး ပါဝင်နိုင်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ Dear Dhammacedi Friends You are cordially invited to regular Dhammacedi Food Fete on 13/03/2021. Since from the beginning of February 2021, the armed forces led by the coup military regime have been killing dozens of innocent Myanmar people who stood up and protested peacefully. As part of the program on the same evening, people of Perth will be praying together for the fallen heroes who have given their lives in the unjust armed violence. All donations will be spending to help the victims of this tragedy in good faith. Please makeaspecial effort to attend and support us.
CDM Support by Myanmar United FC Perth City
CDM Support အတွက် Myanmar United FC (Perth City) က ပြုလုပ်မည့် မုန့်ဟင်းခါး အိမ်အရောက်ပို့‌ပေးမည့်အစီစဉ်
CDM Support Group Fundraising for Myanmar (Perth)
Duration: 27 Feb 2021 - 28 Feb 2021
Mingalathukha Food Fete
Duration: 24 Jan 2021 - 24 Jan 2021
Paw Daw Mu Food Fete
Dhamma Cedi Monthly Food Fete
Duration: 16 Jan 2021 - 16 Jan 2021
Mingalathukha Silent Meditation Retreat
မင်္ဂလသုခဝိဟာရ “#ဝစီပိတ်တရားစခန်း” နှင့် #ဒုလ္လဘရဟန်းခံ ၊ #သီလရှင်ဝတ်ပွဲ – ဒီဇင်ဘာလ ဖွင့်လှစ်မည် ။ ။ ——– နိဗ္ဗာန်ဝင်လမ်း အဓိဋ္ဌာန် – (၃)ရက်တာ “ဝစီပိတ်တရားစခန်း”ကို မင်္ဂလသုခဝိဟာရမှာ ဒီဇင်ဘာ(၂၅)ရက်နေ့မှ – ၂၈ ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်မည်။ ကျောင်းနေယောဂီ လက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တရားစခန်းဝင်လိုသော ဒကာ ၊ ဒကာမများကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။ အချိန်ပိုင်းအပြင်မှလာရောက်တရားထိုင်လိုသောယောဂီများလည်းကြွရောက်တရားထိုင်နိုင်ဖို့အသိပေးဖိတ်ကြားသည်။ စာရင်းကြိုပေးထားနိုင်သည်။ #အစီအစဉ်များ ။ ။ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် ညနေခင်း – ဒုလ္လလဝတ်မည့် ဒကာ ၊ ဒကာမများ ရှင်သာမဏေ နှင့် သီလရှင်စဝတ်မည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့ မနက်ခင်း ရဟန်းအဖြစ်သိမ်ဝင်၍သိမ်ဆင်းမည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်ညနေ ယောဂီစုံ ၊ ၎င်းညတွင် တရားစခန်းဖွင့်မည်။ #လှူဒါန်းဖွယ်ရာများ ။ ။ အာရုဏ်ဆွမ်းတစ်နပ်လျှင် $ 150 နေ့ဆွမ်းတစ်နပ်လျှင် $150 နှုန်းဖြင့်လှူဒါန်းနိုင်သည်။ ဒုလ္လဘရဟန်းများ ၊ သီလရှင်များ ၊ ယောဂီများ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းစဉ် ။ ။ ——- ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ည ၇:၀၀ နာရီတွင် ဒုလ္လဘရဟန်း ၊ သီလရှင်များ နှင့် ယောဂီများ “ဝစီပိတ်တရားစခန်း” စတင်ဖွင့်လှစ်မည်။ ၇:၃၀ တွင် တိသရဏဆရာတော်မဟာထေရ်ထံမှ ယောဂီများက ၈ပါးသီလဆောက်တည်၍ (၃)ရက်တာအတွင်း ဒုလ္လဘရဟန်း၊ သီလရှင်နှင့်ယောဂီများအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားနာယူရန်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက် မနက်ခင်း ၄:၀၀ အိပ်ယာထ ကိုယ်လက်သန့်စင်၍ ၅:၀၀ မတိုင်ခင် “တရားဆောင်” သို့အရောက်ကြွရန်။ ၅:၀၀ နာရီတွင် ဘုရားရှိခိုး မေတ္တာပို့သရန်။ ဗုဒ္ဓဝိဟာရဆရာတော် (မင်္ဂလသုခဝိဟာရ ) ထံမှ ၅:၂၀ မှ ၆:၀၀ အထိ နံနက်ခင်းအလုပ်ပေးတရားနာယူရန်။ နံနက်ခင်း ၆:၀၀ မှ ၈:၀၀ အထိ မနက်ခင်းအဟာရသုံးဆောင်ရန် နှင့် ကိုယ်လက်သန့်စင်ရန်၊ အနားယူရန်။ ၈:၀၀ မှ ၉:၀၀ အထိ တရားအားထုတ်ရန် ၊ ၉:၀၀ မှ ၉:၃၀ အထိ စင်္ကြံကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်ရန်။ တိသရဏဆရာတော်မဟာထေရ်ထံမှ ၉:၃၀ မှ ၁၀: ၃၀ အထိ ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားနာယူရန်။ ၁၀:၃၀ မှ ၁၁:၀၀အထိ ဗုဒ္ဓဝိဟာရဆရာတော် (မင်္ဂလသုခဝိဟာရ ) နှင့်ဒုလ္လဘရဟန်း၊ သီလရှင် ၊ ယောဂီများနေ့ဆွမ်းကြွရန် ၊ ဆွမ်းသုံးဆောင်ရန်။ နေ့လည်ခင်း ၁၂:၀၀ မှ ၁:၀၀ အထိ အနားယူရန် ၊ ၁:၃၀ မတိုင်ခင် “တရားဆောင်” သို့အရောက်ကြွရန်။ ၁:၃၀ မှ ၂:၃၀ အထိ တရားအားထုတ်ရန် ၊ ၂:၃၀ မှ ၃:၀၀ အထိ တရားလျှောက်၊ တရားစစ်ရန်။ [တရားစစ်ဆရာတော် တိသရဏဆရာတော်မဟာထေရ် ၊ ဗုဒ္ဓဝိဟာရဆရာတော် (မင်္ဂလသုခဝိဟာရ )] ၃:၀၀ မှ ၃:၄၅ အထိ ထိုင်တရားအားထုတ်ရန် ၊ ၃:၄၅ မှ ၄:၀၀ အထိ စင်္ကြံတရားအားထုတ်ရန်။ […]
Duration: 25 Dec 2020 - 28 Dec 2020
Paw Daw Mu Food Festival
ပေါ်တော်မူကျောင်း December လရဲ့ ဈေးရောင်းပွဲတော် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အချိန်။ 20 Dec 2020 Sunday 9am-1pm လာမည့်တနင်္ဂနွေ မနက် ၉နာရီမှ ၁နာရီထိ ကျောင်း တည်ရှိရာနေရာ။ 33 Hartfield St, Queens Park အစားအစားများကို ကြိုတင်မှာယူထားနိုင်ကြောင်း
Duration: 20 Dec 2020 - 20 Dec 2020
Dhammacedi Monastery Monthly Food Fete
Duration: 19 Dec 2020 - 19 Dec 2020
Mingalathukha Food Fair Dec 2021
13.12.2020 နေ့ မင်္ဂလသုခဝိဟာရ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏ လစဥ်ရံပုံငွေရှာစျေးပွဲတော်သို့ ကြွရောက်အားပေးရင်း ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါရန် ခင်မင်လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ You are cordially invited to join us on our monthly foodfete this Sunday 13.12.2020. You can place an order in advance if don’t want to miss out your favourite food and Christmas party specials. Thank you for your continued support.
Duration: 13 Dec 2020 - 13 Dec 2020
Mahabodhi Food Fete
မဟာဗောဓိကျောင်း လစဉ်ရံပုံငွေရှာ ကုသိုလ်ပြုစျေးရောင်းပွဲ
Duration:6Dec 2020 -6Dec 2020
Dhammacedi Kathina Ceremony
ဓမ္မစေတီကျောင်း စုပေါင်း ကထိန်
Koondoola Monthly Food Fete
Koondoola ဓမ္မိန္နာရာမကျောင်း စျေးရောင်းပွဲ 29 Nov 2020 Sunday
Paw Daw Mu Kathina Ceremony